Politika · Marsa, 2013 · Global Voices teny Malagasy
Politika · Marsa, 2013
Tantara mikasika ny Politika tamin'ny Marsa, 2013
Lainga, Laingan-doza, ary ny Antontan'isa Tiorka
Azia Afovoany sy Kaokazy 30 Marsa 2013
Rehefa antontan'isa no resaka, dia mijanona manaraka am-bokony fotsiny ny foto-kevitra fony faha-Sovietika ny governemanta Tiorkmena, toy ny amin'ny boky fandrahoan-tsakafo, fanodinkodinana angon-tahiry sy fanalàna an'izay marina rehetra mety manelingelina. Tena avoakan'ny haino aman-jerim-panjakana izay mitondra amin'izao fotoana izao tsara mihitsy ny 'Antontan'isa tsara', toy ny fiakaran'ny vokatra, fa ny vaovao ratsy kosa tsy mba misy mamoaka mihitsy.
Azia Atsinanana 27 Marsa 2013
Novonoin'i Shina ny 1 Martsa 2013 teo ny mpanjakan'ny zava-mahadomelina any Myanmar Naw Kham sy ireo mpikambana ao amin'ny tarika misy azy, Hsang Kham avy any Thailand, Yi Lai, ary Zha Xika avy ao Laos, taorian'ny nanamelohana azy ireo ho namono tantsambo Sinoa 13 tany amin'ny onin'i Mekong tamin'ny 2011. Nahatonga resabe eran-tany momba ny heloka nataony, ny pôlitikan'ny zava-mahadomelina any Myanmar ary ny faneken'ny ampahan'i Shina ny fahazoany drôna, ny fahafatesany.
Hampiroborobo ny ‘Fiarahamonina miara-mientana’ ve ny tetibola 2013-n-i Singapore?
Azia Atsinanana 26 Marsa 2013
Azo antoka ny tetibola 2013 fa hiezaka ny mba hanome izay ilain’ireo singaporean mikasika ny : fameperana entitra mikasika ny asa any ivelany, ny valisoa sy sazy mba hampitomboana ny vokatra avy eto an-toerana, rafitra ara-ketra mivoatra kokoa, fepetra maro mba hanamaivanana ny vidin’ny trano sy ny fiara. Avy amin’ny tetibola, irian'ny fanjakana ny hametraka bebe kokoa ny fandraisan’anjaran’ny fiaraha-monina.Saingy mety ho tanteraka ve izany?